Saturday, 04.04.2020, 12:40am (GMT+5.5) Home Contact
अहिलेको मुख्य समस्या नै राजनीतिमा देखिएको केटाकेटी खलाइ हो - डा नारायण खड्का, नेपाली कांग्रेस
Tuesday, 07.17.2012, 10:09pm
रेमिट्यान्सले उपभोक्तामुखी, परनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र फैलाइदियो । अलिकति गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्ने हो भने मुलुकको निकै अँध्यारो खालको चित्र देखापर्छ । वैदेशिक रोजगारीले कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको मुलुक अहिले परनिर्भर हुन पुगेको छ । विशेष गरी कृषिमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । कृषि छोडेर विदेश गयो अनि त्यहाँबाट आएको पैसाले विदेशबाटै आयात गरिएको वस्तुले दैनिकी चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले संविधान एक किसिमले निस्क्रिय प्रायः छ – प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा एमाले
Tuesday, 07.10.2012, 02:22pm
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई ब्राजिलबाट फर्केलगत्तै उहाँ यसरी बोल्नुभयो कि आन्दोलनबाट आएको डा भट्टराई नभएर पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री बोलेजस्तो ‘म निर्विकल्प छु’ भनेर भन्नुभयो । अहिले पनि कतिपय मन्त्रीहरू हामी पूर्ण बजेट ल्याएरै छाड्छौं कसले के गर्छ भनेर पाखुरा सुर्किरहेका छन् । संविधान सबै च्यातेर अघि बढ्ने हो भने त कुरा बेग्लै हो । होइन भने संविधानको व्यवस्थाको त ख्याल गर्नुपर्छ नि ।
२२ दलको शक्ति प्रदर्शन
Monday, 06.11.2012, 04:29pm
मुलुक सहमति र सहकार्यबाट अघि बढेर उत्पन्न जटिलताको हल गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरू आआफ्ना पक्षधरहरूलाई मोर्चाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । विपक्षीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् भने सत्ता पक्षले आगामी शुक्रबार जनपरिचालनको घोषणा गरेको छ । यस्तोमा सरकारले घोषणा गरेको संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन अवैधानिक भएको र माओवादी सत्ता कब्जाको रणनीतिमा लागेको भन्दै कांग्रेस, एमालेसहितका २२ दलले सरकारबिरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात गरे । गत शुक्रबार खुला मञ्चमा आयोजित आमसभामा बोल्ने अधिकांश नेताले सरकार र माओवादीबिरुद्ध आक्रोश पोख्दै सडकबाटै सरकार ढाल्ने चेतावनी दिए । शुक्रबार खुलामञ्चमा आयोजित २२ दलको आमसभामा प्रमुख नेताहरूको सम्बोधनलाई संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
जातीय आधारमा प्रान्त बनाउन हुँदैन – ताकाशी मियाहारा, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी
Monday, 06.04.2012, 03:37pm
टाकासी मियहारा नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टीका अध्यक्ष हुनुहन्छ । जापानी मूलका नेपाली नागरिक मियाहारा विगत ४६ वर्षदेखि नेपालको विकासमा निरन्तर क्रियाशील रहँदैआउनु भएको छ । नेपालको विकासमा लागि नेपालमै रहेर उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको हुनाले उहाँलाई सरकारले अगिंकृत आधारमा नेपाली नागरिकता दिएको हो । मियाहाराले विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी स्थापना गर्नु भएको छ । नेपालको भूगोल, जलवायु, माटो, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक बनोटलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्नु भएका मियहाराले विकासका लागि स्पष्ट योजना र खाका पनि तयार पार्नु भएको छ । उहाँले नेपालका विभिन्न दूरदराजका गाउँहरूमा पैदलयात्रा गरी त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई बुझेर विकासको योजना तयार गर्नुभएको हो । विकसित नेपाल हेर्ने सुन्दर सपना बोक्नु भएका मियहाराले नेपालको विकासका लागि कृषि, पर्यटन र जलविद्युतक्षेत्रमा विशेष जोड दिनु पर्ने बताउनु हुन्छ । समसामयिक राजनीति र विकासको सन्दर्भमा नेपाल नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टीका अध्यक्ष ताकाशी मियाहारासंग गरिएको कुराकानीको प्रमुख अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै छौं - दुर्गाप्रसाद अर्याल
Thursday, 05.24.2012, 10:18am
दुर्गाप्रसाद अर्याल उच्च माध्यमिक शिक्षा परीषदका परीक्षा नियन्त्रक हुनुहुन्छ । उहाँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको स्थापनाकालदेखि नै परिषदमा सेवारत हुनुहुन्छ । पाठ्यक्रम, योजना, सम्बन्धन, प्रशासन लगायतका शाखाहरूको कार्यानुभव हाँसिल गर्नु भएका नियन्त्रक अर्याल आफ्नो कर्तव्यप्रति अत्यन्त जिम्मेवार र लगनशील व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ । उहाँले परीक्षाको जिम्मेवारी लिनुभएको १८ महिना भएको छ । यसबीचमा परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन उहाँले खेल्नुभएको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ । उहाँले परीक्षामा हुने आर्थिक व्ययभारलाई नियन्त्रणका साथै अन्य अनियमितताहरूलाई हटाउन नीतिगत रुपमै सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको छ । परीक्षा नियन्त्रक अर्यालसंग गरिएको कुराकानीको प्रमुख अंशलाई यहाँ प्रस्तुत छ गरिएको छ ।
राज्यको पुनःसंरचना : समस्या र सम्भावना - मोहनविक्रम सिंह
Tuesday, 05.15.2012, 01:59pm
वर्गीय समस्या देशको आधारभूत समस्या भए पनि नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । सामन्ती व्यवस्था अन्तर्गत देशका विभिन्न जाति, भाषा वा संस्कृतिप्रति भेदभावको नीति अपनाउने वा उनीहरूलाई दवाउने काम हुँदै आएको छ । कुनै जाति, भाषा वा संस्कृतिप्रति त्यस प्रकारको नीति अपनाइन्छ भने त्यसबाट जनतामा असंतोष पैदा हुन्छ । प्रतिरोध पनि हुन्छ ।
राष्ट्रलाई नै फाँसी चढाउन लागेका बेलामा चित्रबहादुरलाई कसैले फाँसीमा चढाउँछ भने मेरा लागि त्य�
Monday, 05.07.2012, 03:17pm
काठमाडौंमा जेलभित्र गएर त मान्छे मार्ने तयारीका खेल भए भने तपाईंले जतिसुकै ठूलो जत्था लिएर हिंडे पनि जीउधनको सुरक्षा छैन । मलाई धेरै मान्छे लिएर हिंड्न त्यति मन पनि पर्दैन । साधारण जनताको जीवन जसरी असुरक्षित छ त्यस्तै अवस्था सबैको हो । कडा सुरक्षा घेरा र धेरै कार्यकर्ताको बीचमा हिंड्दैमा सुरक्षित भइन्छ भन्ने होइन ।
"देश र जनताका हक अधिकार सुनिश्चत नभएसम्म संघर्षहरू भैरहन्छन्" - मोहन बैद्य किरण, वरिष्ठ उपाध्�
Monday, 04.30.2012, 03:46pm
पार्टीभित्र देखिएको दुई लाइन संघर्षमा क्रान्तिकारी धार सशक्त बन्दै गयो र प्रवाहित हुँदै गयो भने त्सल सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ र क्रान्तिकारी धार कमजोर र अवसरवादी धार बलियो बन्दै गयो भने देश र जनताका आशा र अपेक्षाहरू पूरा नहुने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । तर अर्को पाटो के पनि हो भने पार्टीभित्र जुन अवसरवादको संघर्ष छ त्यो निरन्तर चलिरहन्छ । देश र जनताका हक अधिकार सुनिश्चत नभएसम्म संघर्षहरू भैरहने भएकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव नपर्ने कुरा हुँदैन ।
विवादित विषयको निर्णय मतदानबाट गरिए संविधान बन्ने सम्भावना कम हुन्छ – डा. मीनेन्द्र रिजाल, नेपा�
Monday, 04.23.2012, 05:35pm
हात्तीबन बैठकमा हामीहरू शासकीय स्वरुप बाहेक अरु विषयमा लगभग सहमतिमा पुगेका छौं । यो कुनै भावनामा बगेर बोलिएको कुरा हैन । मूलतः शीर्ष नेताहरूबीच जुन किसिमले कुराकानी भयो त्यसमा झण्डैझण्डै टुंगो लाग्यो भन्ने हामी सबैलाई लागेको हो र अर्कोपटक दलका नेताहरू संगै बस्दाखेरी यी विषयहरू टुंगिन्छ भन्ने विश्वास पनि जागेको हो ।
विज्ञापन रद्द होइन व्यवस्थित गरेर खोल्न स्थगित गरिएको हो – हेमनाथ पौडेल, उपकूलपतिका सल्लाहकार, �
Tuesday, 02.28.2012, 10:17am
लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हेमनाथ पौडेल उपकूलपतिको सल्लाहकार हुनुहुन्छ । नेपाली विषयका सहप्राध्यापक पौडेलले वि.सं. २०४५ सालदेखि आरआर क्याम्पसबाट आफ्नो प्राध्यापन सेवा आरम्भ गर्नुभएको हो । अध्ययनशील, स्पष्टवक्ता, इमान्दार एवं सरल व्यक्तित्वका धनी पौडेल कार्यसम्पादनमा निपूर्ण मानिनुहुन्छ । उहाँले आफनो जीवनको महत्वपूर्ण समय अध्ययन, लेखन र समाजसेवामा समर्पण गर्दै आउनु भएको छ । भाषा, साहित्य, समालोचना, कविता निबन्ध लगायतका विधामा दर्जनौं कृतिहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएका सल्लाहकार पौडेल विभिन्न समाचारमूलक तथा साहित्यिक पत्रिकाहरूको सम्पादकको जिम्मेवारीमा रहेका कार्य गर्नुभएको छ । हाल त्रिविको उपकूलपतिको सल्लाहकारमा रही विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउन प्रयत्नरत पौडेलसंग विश्वविद्यालयको बारेमा गरिएको कुराकानीको प्रमुख अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधान लेखन कार्य अगाडि बढ्नेवित्तिकै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन्छ - भीम रावल– नेता, नेकप�
Monday, 02.20.2012, 03:38pm
यो सरकारलाई जेठ १४ सम्म धकेलेर लैजाने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री र यो सरकार चलाउनेहरूले देशमा अर्को संकट सिर्जना गर्न खोजेको ठहरिन्छ ।
नेताहरू विवाददेखि भाग्दै गरेका कारणले समस्या उत्पन्न भएको हो - नरहरि आचार्य
Monday, 02.06.2012, 03:01pm
आयोगको प्रतिवेदनले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छैन । जुन पुरानै विवाद थियो त्यसलाई टुंग्याउन सकेन भन्ने मेरो भनाइ हो । तैपनि आयोगमा गएका साथीहरूले दुई महिना मेहेनत गर्नुभएको छ र एक दुईवटा नयाँ कुरा दिनुभएको छ । त्यसैले म आयोगको प्रतिवेदन निरर्थक भयो भन्ने मान्दिन । तापनि विज्ञहरूको समूहबाट सो अनुसारको सहमतिको प्रतिवेदन आएन । राजनीतिक तहमा जुन किसिमका विवादहरू सिर्जना भएका थिए त्यसको सहमतिका लागि कुनै उपाय आयोगले निकाल्छ कि भन्ने थियो त्यसमा उनीहरू नै सहमतिमा पुग्न सकेनन् ।
कमजोर कूटनीति र फितलो सुरक्षा स्थितिको उपज नै ‘ट्रान्जिट’ भ्रमण – डा. जयराज आचार्य
Monday, 01.16.2012, 04:43pm
सुरक्षा कारणले चीन जस्तो ठूलो र शक्तिशाली मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित हुनु नराम्रो कुरा थियो । तर जेजस्तो भए पनि चिनीया प्रधानमन्त्रीबाट नेपालको भ्रमण भयो । नहुने मामाभन्दा कानो मामा निको’ भनेजस्तै कमसेकम चार घण्टाको विश्रामकै लागि भए पनि नेपालको भ्रमण भयो ।
गुण र दोषको आधारमा परख गर्ने विवेक नेताहरूले गुमाइसकेका छन्
Monday, 01.09.2012, 03:33pm
नेकपा मालेले स्पष्टसंग के भनेको हो भने हामी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरी त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को बहुमतले हटाउन सक्दैन उसलाई महाअभियोग लगाएर मात्र हटाउन सकिन्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्मा बहुमत नभए पनि सरकार चलाउन सक्छ जसरी राष्ट्रपतिले चलाउँछन् ।
» चिनीया प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित हुनुमा भित्री मात्र होइन बाहिरी कारण पनि छ : डा. जयराज आचार्�
» ०६९ जेठ १४ गते संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन : लक्ष्मणलाल कर्ण, सहअध्यक्ष नेपाल सद्भावना पार्ट�
» कसैलाई फाइदा हुन्छ भनेकै भरमा त्यसैको पछाडि सम्पूर्ण पार्टी लाग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन : सीपी गजुर
» जनताको स्वास्थ्यसंग खेलवाड गर्नेलाई कडा कार्बाही हुनुपर्छ : सुरेन्द्रवीर मलाकार
» शिविर नै हस्तान्तरण भैसकेपछि साँचो त्यसबाट अलग हुनसक्दैन : जनार्दन शर्मा, नेता एकीकृत नेकपा माओ�
» प्रान्त भनेको एउटा समूदाय वा वर्गका लागि मात्र होइन : डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद्
» योजनाले मात्र हुँदैन कार्यान्वनतिर जोड दिनुपर्छ
» उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्विकल्प बनेको छ
» नेताहरू सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठनुपर्छ : सुनिलकुमार मानन्धर, मन्त्री- वातावरण
» संविधान बनाउने विषयमा संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि बहस भएको छैन : अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई